‘मी टु’ अभियानको खिल्ली उडाउँदै राष्ट्रपति ट्रम्प| Nepal Pati
पेन्सीलभेनीया । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यौन उत्पीडनको खिलाप चलिरहेको ‘मी- टु’ अभियानको खिल्ली उडाएका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले पेन्सीलभेनीयाकोे मध्यावधी निर्बाचनको एक भव्य र्यालीलाई सम्बोधन गर्दै उक्त अभियानको खिल्ली उडाएका हुन् । प्रेसद्वारा लागु गरिएको नियमको कारण आफुलाई नियन्त्रणमा राख्नु परेको बताउँदै ‘द गर्ल द्याट गट अवे’ उखान तर्फ इसारा गर्दै भने, एक उक्ति हो तर मी टुको निम्ती यसको प्रयोग गर्ने अनुमती छैन । म यस्तो गर्न सक्दिन् ।
‘द गर्ल द्याट गट अवे’ उखानको प्रयोग त्यस्तो व्यक्ति माथि गरिन्छ । जसले तपाइसँग प्रेम गरेको थियो र तपाईलाई छोडेर गएको थियो । तर तपाई अहिले सम्म त्यहि व्यक्तिसँग प्रेम गरिरहनु हुन्छ र उसलाई याद गरिराख्नु हुन्छ । मिडिया तर्फ इसारा गर्दै ट्रम्पले भने, मिडियालाई छोडेर बाँकी सबैलाई पुरानो र वास्तविक उखानको प्रयोग गर्दछु । अझ जोड दिदैं थपे, यहाँ जो मानिस उपस्थित हुनुहुन्छ । तपाईहरुलाई छोडेर बाँकीको निम्ती यसको प्रयोग गर्दछु । उनीहरु भन्छन्, सुन्नु भयो राष्ट्रपति ट्रम्पले के भने ? तपाईले सुन्नुभयो । उनले के भने ?
भारतमा मी-टु अभियानकाे असर
अमेरिका मात्रै हैन भारतभर मी टुको चर्चा चुलिदैछ । मी- टु अभियान अन्तगरत भारतीय महिलाहरुले आफ्नो अनुभव सार्वजनिक गर्दै समाजमा लुकेका भद्र र प्रतिष्ठीत अनुहारको नकाब उतार्दैछन् ।
केन्द्रीय मन्त्री एम जे अकबर, अभिनेता आलोकनाथ, गायक कैलाश खेर, रघु दिक्षित, प्रशान्त झा, सुहेल सेठ र महिला कमिक स्टार अदिती मित्तल समेत मी टुको चपेटामा परिसकेका छन् । उनीहरु माथि यौन उत्पीडन, गलत ब्यबहार, संवेदनशील अंगमा छुने लगायत आरोपहरु लगाईएका छन् । पछिल्लो समय भारतीय सिनेमा उधोगमा यौन उत्पीडनलाई लिएर तनु श्री दत्ताले नानापाटेकर विरुद्ध आरोप दर्ता गरेकी छन् । सन् २००६ मा तराना बुर्केले पहिलोपटक कामको स्थानमा सेक्सुअल हर्यासमेन्टलाई लिएर अभियान चलाएकी थिईन् ।
सन् २०१७ मा अमेरिकी कलाकार अलिस्सा मिलानोले ट्वीटर मार्फत चलाएको मी- टु अभियानलाई साथ दिदैं अन्य कलाकारहरु जीनेथ पाल्ट्रो, आश्ले जुड, जेनिफर लरेन्स र उमा थुर्माेन समेत जोडिन पुगेका छन् ।
हेर्नुहाेस राष्ट्रपति ट्रम्पकाे मी-टु